रुकुममा जिउँदै बच्चालाई राँगाको पेटमा हालेपछी….तुरुन्त हेर्नुस् ! | Public 24Khabar
Home News रुकुममा जिउँदै बच्चालाई राँगाको पेटमा हालेपछी….तुरुन्त हेर्नुस् !
सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ कि राँगाको पेटमा पनि बच्चा हालिन्छ भन्ने सुन्दा । तर यो साँचो हो ।
पुर्वी रुकुममा का टे को राँगाको पेटमा जिउँदो बच्चा हाल्ने एउटा अनौठो चलन छ । त्याहाँका मानिसहरु यस्लाई रैथाने उपचार विधिको रुपमा चल्तीमा चलाई रहेका छन् । रुकुम पूर्वका स्थानीय बासिन्दाले वर्षौँदेखि विश्वासका साथ प्रयोग गर्दै आइरहेको यो उपचार विधि धेरैलाई अनौठो लागे पनि यहाँ भने सामान्य र नियमित रहेको छ ।
शिक्षक घर्तीका अनुसार पुरानो पुस्तामात्र होइन आजको नयाँ पुस्ताले पनि यो पुरानो चलनलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिइरहेको बुुझिन्छ । बच्चालाई राँगाको पेटबाट निकालेर नजिकैको पानीको मूलमा लगेर नुहाइन्छ । यसलाई उनीहरु बच्चा चोख्याएको भन्छन् । यसो गर्दा रोग, का ल, क ष्ट सबै बगेर जाने उनीहरुको विश्वास छ ।
Previous articleसानो उमेर मै जिउमा देबता आय पछि बनिन माता हेर्नुसत बनझाक्रि पनि सङ्गै , बैनिको सुस्वास्थ्यको कामना
Next articleएकै चोटिमा चत्रकै पार्दियो। दशैको टिकाको दिन भान्जाको बिहेमा गको मामा लाइ नचिनेको मान्छेले यस्तो गरे